Sunday September 15, 2019 - 11:14:21 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Markii ugu horraysay hay'ad maxalli Kenyaan ah ayaa warbixin kasoo saartay khasaaraha dhimasho iyo booliska wadankaas kasoo gaaray weerarada Al Shabaab.
Warbixintaan oo ay soo bandhigay hay’adda Booliska Kenya markii magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano NPS ayaa lagu sheegay in ugu yaraan 65 Sarkaal oo ka tirsanaa ciidamada Booliska Kenya lagu dilay weeraro ay fuliyeen Xoogaga Al Shabaab kuwaasi oo ka dhacay deegaano ka tirsan dhulka Soomaalida N.F.D ee Kenya ay gumaysato .
Weeraradasi oo dhacay sanadkii 2018-kii ayaa badankood waxay ka dhacaeen goballada Wajeer, Gaarisa, iyo Mandheera, oo kawadatirsan dhulka N.F.D.
Warbixinta ayaa lagusoo bandhigay in weeraro is xigxigay oo kaliya lagu dilay ugu yaraan 23 Sarkaal halka weerar maalin qura ay fuliyeen Dagaalyahano ka tirsan Al Shabaab lagu dilay 12 Sarkaal kuwaasi oo ka tirsanaa booliska Kenya .
Booliska Kenya wuxuu sheegay in sidoo kale in weerarada lagu dilay saraakiisha Kenyaatiga isugu jireen Kamiinno, qaraxyo, iyo sidoo kale dagaallo toos ah kuwaasi oo lagu beegsaday xarumo ay ciidamadu uga sugnaayeen degmooyin iyo deegaanno katirsan dhulka NFD.
Sidoo kale warbixinta ayaa lagu sheegay in ku dhawaad 536 Sarkaal oo ka tirsan ciidanka booliska Kenya lagu dhaawacay weeraradii dhacay sanadkii 2018-kii ee la soo dhaafay .
Hay’ada warixintaani soo saartay ee Booliska dowlada Kenya ayaa sheegay in xogaha ugu badan ee warbixinta ay ku dhisteen ay ka soo xigteen Hoggaanka Booliska Kenya sida warbixinta lagu sheegay.
Warkan kasoo baxay booliska Kenya ayaa imaanaya xilli ay sii kodheen weerarada hubeysan ee Al Shabaab ay ku beegsanayso ciidamada iyo shaqaalaha dowladda Kenya ee dhulka NFD iyo gobolka xeebta dhaca ee lagu magacaabo Lamu.
Todobaadkii lasoo dhaafay ayay aheyd markii weerar dhabbagal ah alshabaab ay ka fuliyeen deegaanka Ceel Raam ay ku dileen ugu yaraan 9 askari oo katirsan ciidamada Melleteriga Kenya.
illaa iyo hadda hay'adaha iyo Ururada maxalliga dowladda Kenya kuma dhiirran in ay warbixin kasoo saaraan tirada ciidamada melleteriga KDF ee lagu dilay dagaalka ka holcaya gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan gobollada Gedo iyo Jubbada Hoose.
Weerar sanaddii 2016 ka dhacay degmada Ceelcadde ee gobolka Gedo ayaa Melleteriga Kenya lagu gaarsiiyay khasaarihii ugu xooganaa ee abid gaara tan iyo markii la aas aasay waxa loogu yeero dowladda Kenya sanaddii 1963.